आहा ! राँके – Tudikhel – Nepal's Popular Digital NewsPaper
फिदिम, १६ चैत / सडकको छेउमा रहेका पसलमा प्लाष्टिकका बट्टामा बाह्रै महीना राताम्य अकबरे खुर्सानी । मौसमअनुसार साग, इस्कुस, जरा, मटरकोसा, मुला, काउली, बन्दालगायत स्थानीय प्राङ्गारिक सागसब्जी । ललीपप, छुर्पी, घिउलगायत प्याकेटमा राखिएका स्थानीय दुग्ध उत्पादनहरु । विभिन्न प्रकारका प्रारङ्गारिक चिया । चिमफिङ, टिम्बुर, खनक्पालगायत स्थानीय जडीबुटी । पूर्वीपहाडमा उत्पादन हुने मौसमअनुसारका किबी, सुन्तला, स्याउलगायत फलफूल । सबै वस्तु सजाएर राखिएका छन् । इलामबाट पाँचथर र ताप्लेजुङ जाने सबैलाई आकर्षित गर्छ यी सबै कुरा पाइने स्थानीय उत्पादनको राँके बजारले । मेची राजमार्गमा प्रायः साना सवारीसाधन गुड्छन् र ती सबै रोकिन्छन् यही आकर्षक बजारमा । पाँचथर र इलाम जिल्लाको सिमानामा अवस्थित, मेची राजमार्गमा पर्ने राँके बजार स्थानीय उत्पादनको बजारको रुपमा परिचित छ ।
बिक्रीका लागि आकर्षक ढङ्गबाट राखिएका स्थानीय उत्पादनले मेची राजमार्ग भएर यात्रा गर्ने सबैलाई लोभ्याउने गरेको छ । त्यसैले यहाँ स्थानीय उत्पादनको बिक्री पनि राम्रो छ । यहाँका प्राङ्गारिक उत्पादन खरीद नगर्ने कमै मात्र यात्रु हुन्छन् । यहाँ बिक्रीका लागि राखिएका वस्तुको स्वादले धेरैलाई लठ्याउँछ, खरीद गर्ने धेरैले भन्छन्, आहा ! राँके । पाँचथर र इलाम जिल्लामा फैलिएको राँके बजारमा दैनिक लाखौँको स्थानीय उत्पादन बिक्री हुने गरेको छ । यो बजारको आधार भनेकै मेची राजमार्ग हो । मेची राजमार्ग भएर हिँड्ने यात्रुका कारण यहाँको व्यवसाय लोभलाग्दो छ । यात्रा गर्ने अधिकांशलाई आकर्षण गर्न सक्नु यहाँका ब्यवसायीको खुबी हो ।
विगत १३ वर्षदेखि राँके बजारको मध्यभागमा स्थानीय उत्पादनको व्यवसाय गर्दै आउनुभएका चन्द्रवीर तामाङ सरदरमा दैनिक रु सात हजार मूल्यको स्थानीय उत्पादन बिक्री गर्दै आएको बताउनुहुन्छ । “ललीपप, छुर्पी, अकबरे खुर्सानी सबैभन्दा बढी बिक्री हुन्छ”, तामाङले भन्नुभयो, “यो बाटोबाट यात्रा गर्ने प्रायः यात्रुले हाम्रा सामग्री खरीद गर्नुहुन्छ ।” अर्का व्यवसायी नवीन नेम्वाङ दैनिक करीब रु २० हजार मूल्यको स्थानीय उत्पादन बिक्री गर्दै आएको बताउनुहुन्छ । स्थानीय उत्पादन सधैँ बिक्री हुने भए पनि वडादशैँ, तिहार र पाथीभरा मन्दिर दर्शनको समयमा अत्यधिक बिक्री हुने गर्दछ ।
फाल्गुनन्द गाँउपालिका–३ का कृषक राजकुमार नेम्वाङ राँके बजारका कारण स्थानीय कृषि उपज बिक्री सहज भएको बताउनुहुन्छ । आफूले वर्षेनी ३० देखि ४० क्विन्टल अकबरे खुर्सानी बिक्री गर्दै आएको बताउने नेम्वाङ राँके बजारकै कारण आफूले चित्तबुझ्दो मूल्य पाएकामा खुशी हुनुहुन्छ । यस क्षेत्रका युवा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केपछि अकबरे खुर्सानीलगायत कृषि उपज उत्पादनमा केन्द्रित हुँदै गएको नेम्वाङको भनाइ छ । अकबरे खुर्सानी उत्पादनका लागि चर्चित फाल्गुनन्द गाउँपालिकाका खुर्सानी पूर्वी तराईका जिल्ला र राजधानी काठमाडौँमा निर्यात हुने गरेको छ । पाँचथर उद्योग वाणिज्य सङ्घका महासचिव नवराज घिमिरे राँके बजारका कारण कृषिको व्यवसायिकीकरण, पर्यटन प्रवद्र्धन र जिल्लाको अर्थतन्त्र सुधारमा महत्वपूर्ण टेवा पुगेको बताउनुहुन्छ । “स्थानीय उत्पादनको बिक्रीका कारण ठूलो धनराशि स्थानीय कृषकका हातमा पुगेको छ”, घिमिरेले भन्नुभयो, “स्थानीय उत्पादनको व्यवसाय गर्ने व्यापारीले समेत राम्रो आम्दानी गर्दै आउनुभएको छ ।”
Published On: Saturday, March 30, 2019 Time : 10:57:29 175पटक हेरिएको